दक्षिण एसियाका ५ मुलुक सहित हालसम्म विश्व भर ५७ मुलुकमा ओमिक्रोन – tshorolpa
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखाको जानकारी अनुसार,आजको मौसम कस्तो छ ? हेर्नुहोस्
अनलाईन मार्फत जुवा खेलाउने कार्यमा संलग्न १२ जना पक्राउ
तपाईंको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस् राशिफल
श्री स्वस्थानी व्रतकथाको महत्व र महिमा थाहा पाउनुहोस्
इम्युनिटी पावर बढाउन खानुहोस् यी १० खानेकुरा,
काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबार रातिदेखि जोरबिजोर प्रणाली लागु हुने
उपरथी कार्कीको उजुरीले सैन्यवृत्तमा हलचल,राष्ट्रिय सेना नेपाली सेनाकै नेतृत्वविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उजुरी : इतिहासमै पहिलो
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको जानकारी अनुसार,आजको मौसम कस्तो छ ? हेर्नुस
gaurishankar tshorolpa media pvt.ltd koche nepal.com power news राशिफल kocha nepal tshorolpa.com hamro afnai tv power news #covidupdate #coronavirus cricket aashika tamang messi
Home/Uncategorized/दक्षिण एसियाका ५ मुलुक सहित हालसम्म विश्व भर ५७ मुलुकमा ओमिक्रोन
दक्षिण एसियाका ५ मुलुक सहित हालसम्म विश्व भर ५७ मुलुकमा ओमिक्रोन
News २३ मंसिर २०७८, बिहीबार १२:३८
0 63 Less thanaminute
मंसिर २३ , काठमाडौं । पाकिस्तानमा पनि नयाँ कोभिड भेरियन्टका संक्रमित फेला परेका छन् । यो सहित दक्षिण एसियाका पाँच मुलुकमा ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएको छ ।
बिहीबार कराचीकी एक महिलामा ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमण पुष्टि भएको पाकिस्तानका अधिकारीले बताएका हुन् । संक्रमित महिला स्थानीय भएको र विदेश यात्रा गरेको नदेखिएको पनि अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
खोप नलगाएकी ६५ वर्षीया महिलामा ओमिक्रोन संक्रमण देखिएको हो ।संक्रमण देखिएपछि ती महिला अस्पताल भर्ना भएको र हाल डिस्चार्ज गरिएकी उनी घरमै आइसोलेशनमा बसेकी छन् ।
पछिल्लो पटक पाकिस्तानमा ओमिक्रोन फेला परेपछि हालसम्म दक्षिण एसियाका पाँच मुलुकमा यो भेरियन्ट फैलिएको छ ।
संक्रमितमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतमा छन् । त्यहाँ ओमिक्रोनबाट २० जनाभन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् । श्रीलंका र माल्दिभ्समा समेत यो भेरियन्ट फैलिइसकेको छ ।
नेपालमा समेत ओमिक्रोनका संक्रमित पुष्टि भइसकेका छन् । दक्षिण अफ्रिकाबाट मंसिर ३ गते नेपाल प्रवेश गरेका ६६ वर्षीय विदेशी र उनको सम्पर्कमा आएका ७१ वर्षीय नेपाली नागरिकमा सोमबार संक्रमण भेटिएको हो ।
डब्ल्यूएचओले ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्ट फैलिने क्रम जारी रहेको र अस्पतालमा भर्ना हुने मानिसको संख्या बढ्न सक्ने समेत जनाएको छ । डब्ल्यूएचओले डेल्टा भेरियन्ट जत्तिकै वा सोभन्दा कम गम्भीर हुने देखिएपनि संक्रमितहरु अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरेको छ ।
त्यस्तै, केही समय अगाडि मात्रै डब्ल्यूएचओ र अमेरिकाका शीर्ष वैज्ञानिकहरूले ‘ओमिक्रोन’ अन्य भाइरस संस्करणहरु भन्दा खराब नभएको जानकारी दिइसकेका छन् । साथै ओमिक्रोन भेरियन्ट गम्भीरतालाई न्याय गर्न थप अनुसन्धान आवश्यकता रहेको बैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हालसम्म ५७ मुलुकमा ओमिक्रोन फैलिएको छ ।
खबर साभार : अनलाइन न्युज
कोरोना संक्रमित राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको उपचार खर्च सरकारले बेहाेर्ने
२७ कार्तिक २०७७, बिहीबार १३:४१
११५४ जना नयाँ कोरोना सक्रमित थपिए , १००५ जना डिस्चार्ज
५ आश्विन २०७७, सोमबार १७:०१
प्रदेश न ५ को राजधानी भालुवाङ बनाउने प्रस्ताव दुइतिहाइ ले पारित
२० आश्विन २०७७, मंगलवार १५:५५
सङ्क्रमित ४९ पुगे शुक्रबार थप एक जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि :
१२ बैशाख २०७७, शुक्रबार १५:३३
११७२ नयाँ संक्रमित थपिए,१८९३ जना डिस्चार्ज
७ आश्विन २०७७, बुधबार १६:३८
Powered By : Swargadiwari Host